Amafomethi we-Kindle, yiziphi izinhlobo ezifundwa yi-Kindle Thola! | Onke ama-eReaders
UJoaquin Garcia | | Amazon Kindle, eBooks, Ama-eReaders
I-e-book yifayela ledijithali eliqukethe incwadi noma isihloko sokushicilela. Imvamisa ibizwa nge-ebook, igama elivela egameni lesiNgisi elithi electronic book. Ekuqaleni, amadivayisi akwazi ukufunda izincwadi ze-elekthronikhi adidekile negama elithi ebook futhi uma singeza kulokhu i-avalanche yama-akhronimi azungeze amafomethi e-ebook, ukudideka kuyabonakala. Njengamanje, bambalwa abantu abazi kahle ukuthi kanjaniokungamafomethi ahambisana ne-Kindle, i-e-book reader ethathwa ngabaningi njenge i-eReader ehamba phambili.
Akubona bonke abafundi be-e-book abakwaziyo ukufunda amafomethi afanayoImvamisa, umkhiqizi ngamunye uvame ukufaka ifomethi eyodwa noma ezimbili kanye namafomethi ejwayelekile angakhululekile. Ngaphakathi kwalesi sigaba sesibili samafomethi, i-Epub ivelele, okuyifomethi ye-ebook yamahhala, i-txt, i-pdf noma idokhumenti yedokhumenti. Ngokuphathelene nohlobo lokuqala lwamafomethi, amafomethi okuphathelene nabakhiqizi abakhulu abandakanya, imvamisa kuncike enkampanini, kepha konke kutholakala kufomethi ye-Epub abayishintshayo. Okubi ngakho konke lokhu ukuthi uma uthenga i-ebook esitolo sezincwadi, ngaphandle kwalapho sinefomethi yamahhala, ngeke sikwazi ukuyifunda kumfundi kwesinye isitolo sezincwadi.
Lezi zithiyo zivame ukubonakala kakhulu e-Amazon, abafundi bayo, Uhlobo, bafunda kuphela inani elithile lama-ebook, lawo, amafomethi amane ngeka-Amazon. Lezi zakhiwo ziyi i-Kindle Format 7, i-Kindle Format 8, ifomethi ye-mobi nefomethi ye-prc. Lezi zakhiwo zingabuyekezwa njenge-mobi noma i-Kindle Format 7 noma zithathe okujwayelekile, ifomethi ye-Epub njengesisekelo sokwakha lawa mafomethi. Isibonelo esihle salokhu sakamuva kungaba yi-Kindle Format 8. Kepha ake sihlolisise la mafomethi.
1 I-Kindle Format 7 noma eyaziwa nangokuthi i-AZW
2 Uhlobo lwe-Kindle 8 noma i-AZW3
3 Ifomethi ye-Mobi Kindle
5 Amafomethi e-ebook angafundwa yi-Kindle Fire
I-Kindle Format 7 noma eyaziwa nangokuthi i-AZW
Le fomethi ye-Kindle inguqulo ethuthukisiwe yefomethi ye-mobi. Ngo-2008, i-Amazon yathenga inkampani iMobipocket futhi ngayo yonke amalungelo obunikazi nemikhiqizo yenkampani. Lokhu bekungekho okuningi kepha bebenakho okuthandwa kakhulu yi-Amazon, amalungelo obunikazi amafomethi e-ebook, ikakhulukazi ifomethi ye-mobi. I- Ifomethi ye-mobi izama ukulandela imithetho ye-OpenBook, ifomethi esekwe kuzinga lewebhu le-xml. Ngemuva kokuthengwa, i-Amazon yathatha ifomethi, ihlonipha yonke imithetho nokusebenza kwayo, futhi yethula i-DRM yayo, isoftware evimbela ukusetshenziswa kwe-ebook kwi-akhawunti noma ithuluzi elithile, ukuthengiswa kwe-ebook, nansi indlela Uhlobo lwe-Kindle luzalwe luneminyaka engu-7 noma engu-AZW.
Ngokuhamba kwesikhathi, ama-eReaders e-Amazon aguqukile futhi anayo isoftware namafomethi abangawadlala, yingale ndlela esingabona ngayo i-Kindle Format 8.
Uhlobo lwe-Kindle 8 noma i-AZW3
Kwakungukuvela kwe-Kindle Format 7, yayingasenayo ifomethi ye-mobi kanye nesendlalelo esine-drm kepha kwakungokunye okunye. I-Kindle Format 8 noma i-AZW3 yi-ebook elandela indinganiso ye-EPUB3, lapho zifaka khona i-drm futhi ifakwe kwifayela elisefomethi ye-AZW noma Kindle Format 7 ukuze ihambisane namadivayisi afunda ifomethi yakudala. Lapho kudalwa ifomethi ye-mobi kanye ne-Kindle Format 7, ukuma kwefomethi ye-epub kwakusasebenza futhi kudidekile, ngakho-ke i-Amazon ayizange ilinge ngale fomethi kuze kufike i-AZW3. I-AZW3 ayisebenzisi amandla we-HTML5 ngokugcwele njengoba amanye amathegi amasha engawasekeli futhi amanye angasasebenzi ayaqhubeka nokuwasebenzisa. Ngaphezu kwalokho, indinganiso yeCSS3 ayilandelwa ngokuphelele, ezinye izinto ezinjengengqimba yangemuva engaguquki ayihambisani ne-CSS3.
Ifomethi ye-Mobi Kindle
Kanye nalezi zakhiwo ze-Kindle, ama-eReaders e-Kindle nawo asekela ifomethi ye-mobi, yize imelela ingxenye endala kakhulu ye-Amazon, le fomethi iyaqhubeka ikhona futhi i-Amazon iyaqhubeka nokuyixhasa kuma-eReaders ayo. Vele, ifomethi kuphela engena-DRM, njengoba kuchaziwe yi-Amazon. Noma kunjalo iMobi engena-DRM inezendlalelo ezimbalwa zokuvikelwa selokhu yadalwa yinkampani iMobipocket imele ifomethi yesibili ye-ebook abayidalile.
Eyokuqala kulawo mafomethi i-Amazon eyithola ngokuthengwa kwenkampani nokuthi isidlulisele kubafundi bayo ifomethi ye-prc. I-prc yifomethi elula efana kakhulu nefomethi ye-mobi kepha ngaphandle kwezendlalelo zayo zokuvikela, ngakho-ke njengamanje bonke abafundi abafunda ifomethi ye-mobi bangafunda ifomethi ye-prc. Kuyaqabukela kakhulu ukubona ama-ebook ngale ndlela, okungenani akhona manje, kepha njengoba kungekho ukuguqulwa okuhlelekile kwekhathalogu yohlobo, kuyadingeka ukugcina le fomethi yakudala kubafundi, okungenani ngokufunda ama-ebook amadala.
Ngaphezu kwezakhiwo zayo, I-Kindle futhi isekela amanye amafomethi okungewona ama-Amazon noma anamalayisense ngaphansi kwe-GPL. Phakathi kwalawa mafomethi, i-PDF ivelele, ifomethi yefayela okungeyona ifomethi ye-ebook, kepha uhlobo lwefayela olusebenza kahle kakhulu ekufundeni. I-Pdf ngeka-Adobe futhi isifinyezo sayo, i-Portable Document Format, ibhekisa kwisici sayo esihle kakhulu, ukuphatheka. Yize i-Adobe ingumakhi omkhulu wale fomethi, ngo-2008 yayikhulula futhi yaba yingxenye ye-International Organisation for Standardization nalokho okwaba yifomethi evulekile. Lokhu kwenze ukuthi ifomethi ye-pdf nokusebenza kwayo kusebenze kahle kuma-Amazon eReaders, noma kunjalo usayizi wesikrini, okwamanje ungaphansi kuka-9,7 ”, kwenza ukufunda kube nzima kwabanye abantu. Ekuqaleni lokhu kwazanywa ukuxazululwa ngokwakhiwa kohlobo olubanzi, i-Kindle DX edumile, kepha le-eReader yasheshe yashiywa ifuna ezinye izindlela njengokuguqula idokhumenti ye-pdf ibe yifomethi ye-Epub noma ukumane usebenzise i-pdf ibe ngosayizi we isikrini.
Nomusa naye iyakwazi ukuxhasa amafomethi amadala, njenge-txt noma i-Html. Owokuqala wabo, i-txt yifomethi elula kunazo zonke ekhona emhlabeni wekhompyutha. Abaningi bethu basebenze ngale fomethi, yifomethi eyenziwe yiWindows Notepad, kepha njengamanje ukufunda idokhumenti njengencwadi kule fomethi kuwumsebenzi onzima ngoba le fomethi ayiziboni izinketho zokuhlela eziyisisekelo noma ukuhlelwa kombhalo.
Abafundi bamuva be-kindle bahlanganise ukufundwa kwamafomethi we-doc ne-docxLawa mafomethi akhiqizwa yiMicrosoft Word futhi ayindlela yangempela kuma-ebook enziwe nge-txt. Ngokungafani ne-txt, amadokhumenti e-doc ne-docx asivumela ukuthi sibe nencwadi ehleliwe nehlelwe ngaphambili ukuze ifundwe. Kepha lezi zakhiwo ezimbili azihloselwe ukuthi zibe ama-ebook noma, ngakho-ke ukusetshenziswa kwazo kunezithiyo ezimbalwa kunoma imuphi umfundi. Enye yalezo zithiyo isayizi kasayizi wefayela. Uma sibheka usayizi wama-ebook ngamafomethi we-AZW ne-AZW3, lokhu akukukhulu kakhulu, imvamisa kudlula cishe ama-megabyte amabili, kepha-ke, i-ebook ngefomethi ye-doc noma ye-docx ingahlala izikhathi eziphindwe kathathu ngaphezulu, kube nzima kakhulu phatha futhi usebenzise i-Kindle.
Ama-eReaders ayinki e-elekthronikhi, okungukuthi, i-Kindle, nawo angakwazi ukukhiqiza izithombe, noma zingekho ngombala, uma ukuqhathanisa nokuguqulwa kwethoni kungabongwa. Lokhu ku-Kindle wakamuva, onobuchwepheshe bamuva be-inki ye-elekthronikhi futhi nesinqumo esiphezulu, kuthakazelelwa kakhulu. Uma lokho esifuna ukukubona kuyizithombe eziku-Kindle Fire, ngaphezu kwalokhu okungenhla sinethuba lokubona izithombe zinombala. Amafomethi wesithombe maningi futhi ahlukahlukene, kepha akukho Kindle ongafunda wonke amafomethi. Okuhle ngalokhu ukuthi i-Amazon inakekele ukuze abafundi bayo bakwazi ukufunda amafomethi ezithombe athandwa kakhulu. Ngakho-ke, amafomethi wesithombe azowasekela yi-jpg, png, bmp, gif.
Amafomethi e-ebook angafundwa yi-Kindle Fire
I-Las Umlilo Womusa kungabhekwa njenge- isigaba sesibili sabafundi be-Kindle yize kungekho muntu obabiza kanjalo. Isimo samadivayisi womndeni we-Kindle Fire yileso sethebhulethi, yize isoftware yayo ithambekele kakhulu emhlabeni ofundwayo, kangangoba nosayizi wezikrini zamadivayisi akhona, wakhethwa ukunikeza umfundi unethezeka kakhudlwana lapho efunda.
I-Kindle Fire iphethe enhliziyweni yayo inguqulo ye-Android eyenziwe ngokwezifiso yi-Amazon uqobo, uhlelo olunjalo lokusebenza lubizwa ngeFireOS. Ngokuvamile, kungashiwo ukuthi ukuba ithebhulethi nokuba ne-Android, i-Kindle Fire ingaxhasa noma iyiphi ifomethi, kepha i-Amazon evela kumodeli yokuqala ikwazile ukufaka noma yiluphi uhlelo lokusebenza ku-Google Play Isitolo, ngakho-ke singafunda kuphela amafomethi i-Amazon isitshela ngaphandle kokuthi sithikameze isoftware yeAmazon.
Ekuqaleni, njengoba sithenga i-Kindle Fire yethu bese siyivula, singafunda noma yimaphi amafomethi e-ebook esishilo ngenhla, kepha futhi singafunda amanye amafomethi we-multimedia okuthi, yize engahlobene ne-ebook, abe kuyasiza ukwazi lapho usebenzisa ama-ebook asebenzisanayo.
Ezinyangeni ezedlule, i-Amazon ingeze insizakalo ezwakalayo ohlelweni lwayo lwemvelo. Lokhu kwenze amadivayisi ane-inki okungeyona eye-elekthronikhi akwazi ukudlala amafomethi alalelwayo, ikakhulukazi amafomethi wohlelo lokusebenza oluzwakalayo, okuyi-aax.
Ifomethi ezwakalayo ingenye yamafomethi amasha angeniswe yi-Amazon kumadivayisi akho ngesikrini se-LCD noma isikrini sombala. Lawa madivayisi anamandla kakhulu kune-eReaders, okusho ukuthi angakwazi ukuxhasa inani elikhulu lamafomethi, hhayi lawo kuphela aziwa ngama-ebook kodwa namanye amafomethi asinika ukufinyelela kuvidiyo, umsindo nokuphequlula okuphelele kwewebhu.
Phakathi kwamafomethi wevidiyo, i-mkv ne-mp4 ziyabonakala, yize befunda ne-3gp ne-vp8 (webm). Ngaphakathi kwamafomethi alalelwayo, ngaphezu kwefomethi ye-aax, futhi bayakwazi ukudlala ifayili le-mp3, ifayela le-OGG, ifomethi yomsindo wamahhala engalingana namafayela we-mp3 nama-classic anokwandiswa kwe-WAV.
Njengoba sishilo ngaphambili, singaguqula isoftware yoMlilo Womusa, ngokufaka izinhlelo zokusebenza nge-apk noma ngokugenca ithebhulethi. Esimweni sesibili, i-Amazon ayinabo obhekene nesiqinisekiso, ngakho-ke akunconywa ukukwenza ukuthola i-ebook ifundwe ngefomethi ye-epub, kodwa okokuqala, ingenziwa futhi izosivumela ukuthi sengeze amafomethi amasha e-ebook njengefomethi ye-Epub. Lokhu kuzokwaziwa yi-Kindle Fire yethu uma sifaka izinhlelo zokusebenza ezifana ne-Aldiko noma i-FbReader. Lezi zinhlelo zokusebenza zingatholakala esitolo seGoogle, esitolo se-Amazon ngisho nakuwebhusayithi yayo, ngakho-ke ukukuthola kulula futhi ukufakwa kulula ukukwenza. Uma uhlelo lokusebenza selutholakele, silusindisa kuthebhulethi bese simaka inketho yokuthi "ukufaka kusuka emithonjeni engaziwa" okuzosivumela ukuthi sifake noma yiluphi uhlelo lokusebenza esilifunayo.
Lezi cishe yizindlela ze- Amafomethi we-Kindle ukuthi ama-Amazon eReaders ayasisekela futhi ngithi cishe ngoba asikaze singene emininingwaneni yezobuchwepheshe engadida umfundi ojwayelekile ofuna kuphela ukwazi ukuthi ama-ebook asevele enawo ku-Kindle angafundwa noma cha.
Siyethemba ukuthi ngalo lonke lolu lwazi, usuvele ucacile yiziphi izakhiwo ezifundwa yi-Kindle noma ngabe unemibuzo, sishiyele amazwana.
Indlela ephelele ye-athikili: Onke ama-eReaders » izinkampani » Amazon Kindle » Amafomethi we-Kindle, yiziphi i-eBooks ongazivula kusifundi se-Amazon?
Ayikho i-ePub ??
hahaha, ukufingqa izindatshana awunambangi
Nginomlilo ovuthayo futhi cha. Ukufunda angiqiniseki. Ngokuzimisela, kuluhlobo oluyinqaba. Ngingachitha amahora amaningi ngidlala i-NBA futhi ngibuka amavidiyo futhi ngitshuza kancane kepha ifunda incwadi futhi ukukhanya kungikhathaza kakhulu. Angazi ukuthi kungani ngifunda uma kungikhathaza futhi kokunye hhayi kangako kepha kunjena. Ekufundeni ngincamela uyinki we-elekthronikhi ku-Paperwhite yami.
UJorge Carlos kusho
Awufuni ngokujulile i-ePub?
Ukuthi ngifuna ukuthenga i-Kindle Paperwhite, ngoba ngifunde ukuthi manje iletha i-4GB yesikhala. ngakho-ke ungabeka ama-ebook amaningi. Umuntu engangijwayelene naye wangitshela ukuthi kungenzeka kodwa ngingathanda ukuthi othile angitshele uma kungenzeka yini ukuthi afunde ama-ePub akwi-Paperwhite.
Phendula uJorge Carlos
Njengoba uVictorio esho ngohlelo lweCaliber, ungahamba ngokuphelele usuka kolunye uhlobo uye kolunye ngaphansi kweminithi, ngakho-ke uma unentshisekelo ku-Kindle, akusona isithiyo ukuthi abayifundi iPub. Ngine-Paperwhite nazo zonke izincwadi engizilandayo zise-ePub futhi angikaze ngibe nezinkinga zokukwazi ukufunda ku-eReader yami ngoba ngiyaziguqula ngaphambi kokuzidlulisela ku-AZW3
ICaliber iguqula futhi ihlele noma iyiphi ifomethi yencwadi yedijithali, ngine-tablet efunda i-epub ne-Kindle efunda i-AZW3, ngalolu hlelo ngihamba ngiye kolunye uhlangothi ngiye kolunye ngaphandle kwezinkinga.
UMa. Josep kusho
Sawubona, ngisanda kwehlisa izinga lami futhi angikwazi ukushintsha ifomethi ibe yi-AZW3 ngenxa ye-DRM
Ngiyacela, yini engingayenza?
Phendula uMa. Josep
UPedro Jose kusho
Usebenzisa iJailBreak futhi ufake i-CoolReader ungafunda noma iyiphi ifomethi oyifunayo
Phendula uPedro Jose
UDaniela noPedro Jose, ngiyabonga kakhulu ngemibono yenu, ngicabanga ukuthi namhlanje ngithole iPapwhite, engibambelele kuleyo yeGame of Thrones ngibe sengiya kwisaga seDune, bengikade ngifunda ku-iPad kodwa Ngiyithengisile ukuze ngiqoqe futhi ngithenge i-laptop, ngakho-ke izongenza ngibe yisidina ukuyifunda ethangeni.
Pedro Jose, ngingenza i-JB ngenguqulo yakamuva ye-paperwhite? noma yisiphi iseluleko sayo?
Ngiyabonga ngemibono yenu
Ngibe ne-paperwhite iminyaka engu-2 futhi inobuhle nobubi bayo. Njengomfundi, kuhle ukufundwa. Kuphelile kahle kakhulu futhi umuzwa ojwayelekile muhle. Lokho kusho ukuthi kunezinto ezingahambi kahle kangako. Isibonelo, isiphequluli sokuhlola esingapheli sinekhwalithi encane. Umhumushi akanakukhethwa, uma uthanda umhumushi we-Bing kahle, uma kungenjalo, kufanele ubekezelele. Futhi akubandakanyi noma yiziphi izilimi zenhlonipho njengeCatalan, iBasque, njll.
UJorge Carlos, Usesho nge-Google, kulula kakhulu
Ngivele ngangabaza phakathi kwephepha le-kindle nephepha le-Samsung Note 8.
Inzuzo yeNothi ukuthi inamandla amakhulu futhi ingenza ezinye izinto. Umbuzo uthi ifundeka kahle kangakanani ngemodi yayo yokufunda.
Nginombuzo… Nginencwadi esivele ngiyilayishe ku-amazon, inezithombe phakathi kwezigaba (kusetshenziswa igama) futhi iqiniso ukuthi ngibe nokuphazamiseka okukhulu ukuzigcina zihambelana futhi zisendaweni yazo njengoba kufanele. Ngokufanayo, lapho ngiyilayishe ku-amazon, kangangoba ngithathe isinqumo sokususa izithombe ezisencwadini yami, okungikhathaze kakhulu. Ungangisiza ngiyixazulule? Ngiyabonga
Ngisanda kuqala ngo-Kindle futhi izincwadi engizibekile aziveli ndawo. Ngiyahlanya !!!!!!
Sawubona, ngingathola i-Kindle yesekondi lesibili. Ngokunikezwe lokhu, ngithanda ukwazi ukuthi ngabe ifomethi ye-Kindle azw4 iyahambisana emuva emuva ngempela.
Kwenzeka ukuthi idivayisi yesizukulwane sesine isekele kuphela ifomethi ye-azw futhi angazi noma ifomethi ye-azw3 izosebenza kuyo yini. Ngiyabonga
Sawubona, ngilande i-kindle ye-pc kanye nosuku lokuqala engilufundile futhi lwasebenza ngokumangazayo kepha-ke alifuni ukuqala, lihlala lapho liqala. Kwenzenjani? Engingakwenza. Nginamawindi 10 futhi nginamazinga angama-34 bit no-64 bit. futhi ukufunda i-epub.
IKobo Aura Edition 2, isimanga esingalindelekile esivela kuKobo